Dual booting, n'ihi na ọtụtụ akụkụ, bụ n'ezie dị ka na-agba ọsọ abụọ dị iche iche kọmputa si otu ngwaike, ezie. Bootcamp dị mma, mana ịgbanwee na azụ abụghị ọrụ dị mfe. Aghota edoziwo nsogbu ahụ, n'agbanyeghị ma jikọta ụwa abụọ n'ime ụwa nke na-adịchaghị ka ọ dị mma! Anọ m na-agba Ndekọ (ekele enyi, Bill) kemgbe mmalite ya.
Mgbe coherence ke ẹkenam, nke ahụ bụ mgbe crazy stof malitere ime… inwe n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọrụ mmanya na apple mmanya mmanya niile na otu window dị nnọọ ka ihe niile na-ezighị ezi! Ọbụna njọ? Dọrọ na idobe si Windows ngwa ka Mac ngwa na Anglịkan. Chaị! Na Mac na PC esemokwu na-ezu ike, ọ bụghị ya?
Mgbe agụ pụta, ọ dị m ka ọ happinessụ m agwụla! Emebiri m XP ma enweghị m ike ịnweta ngwa m ka ọ rụọ ọrụ dịka ha si eme. Emechara m pee, ọbụna na-eji ohere dee ụfọdụ ndị folks n'elu Ndekota n'onwe ya. Ha bụ ezigbo ụmụ nwoke ma mesie m obi ike na enyemaka dị n'ụzọ!
Izu a ka ọ bịara! Ọhụrụ upgrades maka Ndekota kwukwara ụfọdụ ụfọdụ atụmatụ tinyere zuru Leopard ndakọrịta. Ọ bụrụ na ị na-achọ oké ngwa maka gị Mac enthusiast - nke a nwere ike ịbụ ya.
Tags: ihe ngosiimewe nzaghachinchọpụta ahịanyocha onlinenzaghachi ngwaahịasocial media lifecyleSurveyMonkeynyocha maka nyocha ahiaịbervungwá ọrụ weebụ